आजका पत्रपत्रिकाः गाह्रो भएपछि केसीले बोलाए चिकित्सक — Harpraharnews.com
आजका पत्रपत्रिकाः गाह्रो भएपछि केसीले बोलाए चिकित्सक
राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषयहरु परेका छन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले भर्ना गरेका बालबालिका विद्यालय नगएका देखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेकासम्मका खबरलाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
यसका अलावा असारे विकासको विकृति, डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि चिकित्सक बोलाइएको , यातायात सिन्डिकेटलाई पुससम्मको म्याद थप गरिएको लगायत समाचारले पनि आजका पत्रपत्रिकामा उत्तिकै महत्त्व र स्थान पाएका छन् ।
-मन्त्रीले भर्ना गरेका बालबालिका विद्यालय गएनन्
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नै भर्ना गरेका बालबालिका विद्यालय नगएको खबर छ ।
नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ– नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित रारा महोत्सव उद्घाटन गर्न मुगु पुगेका प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, मुख्यमन्त्री र नेताहरूको लावालस्कर थियो । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय ठिन्ले स्याङ्हु तामाङलाई र श्रीमती राधिका शाक्यले स्थानीय छिरिङ छेम्जोङ लामालाई स्थानीय बुद्ध माविमा कक्षा १ मा भर्ना गराएका थिए । दुवै विद्यार्थीले अहिले पढिरहेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीको टोली काठमाडौं फर्किएपछि अभिभावक र विद्यालयसँग कुनै सम्पर्क छैन ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले पर्साका २ तथा सिरहा र धनुषाका एक,एक गरी चार बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले उनी तीन बालबालिकाको मात्रै अभिभावकत्व लिएको दाबी गर्छन् । धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिका–५ परती टोलकी पाँच वर्षीया राधिका दासलाई मुख्यमन्त्री राउतले बिर्सिएका छन् ।
-बजेट खर्चमा बेथितिः अन्तिम दिन ३३ अर्ब भुक्तानी
सरकारले असार १ गतेसम्ममा पुँजीगत बजेट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। असार एक महिनामा मात्र ९६ अर्ब खर्च गरेको छ । यस्तै असार १ गते मा चालु खर्च ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ गरेकामा असारभरिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । दुवै जोड्दा असारमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
अर्थ मन्त्रालयले काम हुनेबित्तिकै बिलअनुसार रकम भुक्तानी गर्न र वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी चर्च नगर्न बारम्बार तोकेता गर्दै आए पनि सबै मन्त्रालयले अटेरी गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जस्तै संसदीय समितिहरु र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा गुणस्तरीय काम नभएको र अनियमितता पनि हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिँदै आएका छन्।
कतिपय आयोजनाहरुले दिएको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु पनि औंल्याएको छ । तर वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ।
गत वर्ष असार अन्तिम तीन दिन ९२९, ३० र ३१० मा पुँजीगत र चालु गरी ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसमध्ये पुँजीगत ३५ अर्ब र चालु ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालु वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ मा पुँजीगत बजेट मात्रै साढे २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
-यातायात सिन्डिकेटलाई पुससम्मको म्याद
सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत प्रारम्भिक सुझाव दिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, कार्यदलले सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । जबकि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भने कार्यदलले सुझाव मात्र दिएको र पुस मासन्तअघि नै कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिने बताए ।
-गाह्रो भएपछि केसीले बोलाए चिकित्सक
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । आइतबार राति डा. केसीलाई धेरै असहज भएपछि उनले सहयोगका लागि चिकित्सकलाई आग्रह गरेका थिए । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार डा. केसीको छातीमा पीडा बढेपछि र सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनी केहीबेर अत्तालिएका थिए ।
चिकित्सकका अनुसार डा. केसीको मुटुमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ । मुटुको चाल निकै बढेको र यसो हुनु मानस्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुने चिकित्सकले बताएका छन् ।
नागरिक दैनिकका अनुसार केसीको घाँटीमा पनि संक्रमण देखिएको छ । हात पति सुन्निएको छ ।
-अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज हेर्नुहाेस्
डा.केसीप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै संसदमा कांग्रेसको अवरोध, शिक्षामन्त्रीले बोल्न पाएनन्
इन्स्टाग्राममा फ्यानहरुसित शाहरुखको रमाइलो प्रश्नोत्तर